Dhaabbanni ‘care Ethiopia’ Jedhamu Hawaasni Godinaalee I/A/Booriifi Buunnoo Bedellee Naannoo Bosonaa Yaayyoo jiraatan bosonicha kununsaa akka irraa fayyadamaniif piroojekti qarshii Miliyoona 100 ol hojii irra olchuuf qophii ta’uu beeksisera. - ETHIOPIANS TODAY
Dhaabbatichis hojiirra olmaa piroojektichaa irratti qooda fudhatoota Godinaalee lamaanii waliin magaalaa Mattutti mariyatera. Bosonni Yaayyoo Yuneeskotti galmaa’e Aanaalee Godina I/A/Boor 5 fi Godina Buunnoo Bedellee Aanaa tokko keessatti argamu lafa heektaara kuma 100fi kuma 67fi 021 ol haguggee argama.
Hawaasni Godinaalee Lamanii Bosona kununsuun dhaloota irraa dhalootatti dabarsaa yoonaan gahee jiraa.Haata’uuti hawaasni naannoo bosona Yaayyoo jiraatanus bosona kana irraa fayyadamuun wal qabatee yeroo adda addaatti komeewwan gara garaa kaasaa turaniru.
Gaafiwwan itti fayyadamumaan wal qabatee bosona kana irratti ka’u deebisuuf bosonni kun caalmaatti akka kununfamuuf dhaabbani care Ethiopia jedhamu Piroojektii Aanaalee Yaayyoo,Dooranii fi Cooraa keessatti waggaa sadiif turu qarshii miliyoona 100 akkaataa hojirra olmaa isaa irratti hawaasa Godinaalee lamaanii waliin Magaalaa Mattutti mariyatera.
Qindeessaan Piroojektichaa Obbo Barasaa Asmaraa kaayyoon sagantichaa inni ijoon Uummanii qabeenya uumamaa osoo hin mancaasiin kununsaa irraa fayyadamuun jiruuf jireenya isaa cimsachuun dinagdee fi galiin akka of danda’u taasisudhas jedhanirru.
Bulchitootni Aanaalee Pirojektiin kun keessatti hojirra ooluus hojii dhaabbatichi hawaasa fayyadamaa taasisuuf qabeenya uumamaa kununsuuf qabatee adeemuu kanaafis qindoomina qaama hundaa cimsuun kan hojjeetan ta’uu himaniiru. Hawaasni Godinaalee Lamanii Saganticha irratti hirmaatanis piroojektichi Aadaa fi duudhaa yeroo dheeraaf bosona kununsuuf qaban cimsuun bosona kana kununsaa dinagdee isaanii guddisuuf kan isaan kakaasu ta’u dubbataniru.
Bosonni Yaayyoo kunis UNESCOtti A.LA Waxabajii 10 bara 2010 Bosona Yaayyoo Baayoosefeer jedhamuun kan galmaa’e ta’uu ragaan arganne ni mulisa.